သင့်မှာ လိုအပ်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်မရှိဘူး ဖြစ်နေလား ။ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ။ သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်နေမှုထိုင်မှုကို ပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါ ။ BMI တွက်နည်းကိုသုံးပြီး ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ အရပ်အမောင်းကို တွက်ချက်စစ်ဆေး ကြည့်တဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ပုံမှန်ရှိသင့်သလောက် မရှိပဲပိန်နေတယ်ဆိုရင် သင် သတိထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ကိုယ်အလေးချိန် မပြည့်ပဲ ပိန်လွန်းတာကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းကျိုးကို များစေပါတယ် ။ အရိုးပါးလွယ်တာမျိုး ဖြစ်စေပြီး ဆိုးကျိုးတစ်ချို့ကို ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ပြည့်ပြီး ပိုမိုကြည့်ကောင်းလာစေမဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အကြံပြုချင်ပါတယ် ။
ပိန်တဲ့သူတွေအတွက် ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာအောင် ကြိုးစားရတာက ဝတဲ့သူတွေ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျအောင် ပြုလုပ်ရတာလို မလွယ်ကူလှပါ ။ ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေဘို့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မဲ့ အစားအသောက်ကို စားပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုပါတယ် ။
တစ်နေ့တာအတွင်း အစားအစာကို နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် စားရာကနေ ငါးကြိမ် ခြောက်ကြိမ် ခန့် စားသုံးပေးပါ ။
ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်တင်းမှု ရှိစေဖို့ အခွံချွတ်မထားတဲ့ အစာတွေ ဥပမာ…. ပေါင်မုန့်ညို ၊ ဆန်လုံးညို ၊ ခေါက်ဆွဲညို ၊ သစ်သီး ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၊ အဆီနည်းနွားနို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ အဆီနည်းအသား အရေခွံမပါတဲ့ ကြက်သား ၊ ငါး ၊ အခွံမာအသီး အစေ့အဆန်တွေကို စားသုံးပေးပါ ။
ကယ်လိုရီနည်းပြီး အာဟာရတန်ဖိုးမပါသလောက်ရှိတဲ့ အချိုရည်တွေကို ရှောင်ပါ ။ သစ်သီးဖျော်ရည် နွားနို့ ဒိန်ချဉ် နဲ့ ရေကိုများများ သောက်ပါ ။
ထမင်းမစားခင် နာရီဝက်အလိုနဲ့ စားပြီး နာရီဝက်အတွင်းမှာ အရည်သောက်ပါ ။ ထမင်းစားခါနီးသောက်ရင် ဗိုက်ပြည့်တင်းကာ အစားစားချင်စိတ် နည်းသွားပါလိမ့်မယ် ။
ကယ်လိုရီ ပါဝင်မှုများတဲ့ အစာတွေ အခွံမာသီးတွေ မြေပဲ ထောပတ်သီး စတာတွေကို စားပါ ။အိပ်ယာဝင်ချိန်မှာ နွားနို့ ငှက်ပျောသီး စတဲ့ အစာတွေ စားပါ ။
ကြက်သားကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်စွပ်ပြုတ်ထဲ ထည့်၍ ရောနှော ချက်ပြုတ်တာမျိုး ကြက်ဥ ဘဲဥ ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ ရောကြော်တာမျိုး ကုလားပဲကို ဟင်းသီးဟင်းရွက် အစုံအလင်ထည့်ပြီး ရောချက်တာမျိုးတွေ ပြုလုပ်ကာစားပေးပါ ။
ကြွက်သားထုထည် ကြီးမားလာစေဖို့နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်တင်း သန်စွမ်းလာစေဖို့ အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ် ။ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းဟာ အစာစားချင်စိတ်ကို တိုးမြင့်လာစေပါတယ် ။
ပိန်နေလို့ စိတ်ညစ်နေမဲ့အစား ဖော်ပြပါ ကျင့်စဉ်များနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တက်အောင် ပြုလုပ်လိုက်ပါ သင့်ကို စိတ်အလို ပြည့်စေမှာမလွဲပါ ။
သငျ့မှာ လိုအပျတဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျမရှိဘူး ဖွဈနလေား ။ စိတျမပကျြပါနဲ့ ။ သငျ့ရဲ့ နစေ့ဉျနမှေုထိုငျမှုကို ပွနျပွီးထိနျးသိမျးလိုကျပါ ။ BMI တှကျနညျးကိုသုံးပွီး ကိုယျအလေးခြိနျနဲ့ အရပျအမောငျးကို တှကျခကျြစဈဆေး ကွညျ့တဲ့အခါ ကိုယျအလေးခြိနျဟာ ပုံမှနျရှိသငျ့သလောကျ မရှိပဲပိနျနတေယျဆိုရငျ သငျ သတိထားရမှာပဲဖွဈပါတယျ ။ ကိုယျအလေးခြိနျ မပွညျ့ပဲ ပိနျလှနျးတာကလညျး ကနျြးမာရေးအတှကျ မကောငျးကြိုးကို မြားစပေါတယျ ။
အရိုးပါးလှယျတာမြိုး ဖွဈစပွေီး ဆိုးကြိုးတဈခြို့ကို ဖွဈစနေိုငျတာကွောငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျပွညျ့ပွီး ပိုမိုကွညျ့ကောငျးလာစမေဲ့ နညျးလမျးတှကေို အကွံပွုခငျြပါတယျ ။ ပိနျတဲ့သူတှအေတှကျ ကိုယျအလေးခြိနျ တကျလာအောငျ ကွိုးစားရတာက ဝတဲ့သူတှေ ကိုယျအလေးခြိနျ လြော့ကအြောငျ ပွုလုပျရတာလို မလှယျကူလှပါ ။
ကိုယျအလေးခြိနျတကျစဘေို့အတှကျ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျမဲ့ အစားအသောကျကို စားပွီး ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုကို ပုံမှနျလုပျဆောငျပေးဖို့ လိုပါတယျ ။
တဈနတေ့ာအတှငျး အစားအစာကို နှဈကွိမျ သုံးကွိမျ စားရာကနေ ငါးကွိမျ ခွောကျကွိမျ ခနျ့ စားသုံးပေးပါ ။
ကနျြးမာရေး ကောငျးမှနျပွီး ကိုယျခန်ဓာပွညျ့တငျးမှု ရှိစဖေို့ အခှံခြှတျမထားတဲ့ အစာတှေ ဥပမာ…. ပေါငျမုနျ့ညို ၊ ဆနျလုံးညို ၊ ခေါကျဆှဲညို ၊ သဈသီး ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ၊ အဆီနညျးနှားနို့နဲ့နို့ထှကျပစ်စညျးတှေ အဆီနညျးအသား အရခှေံမပါတဲ့ ကွကျသား ၊ ငါး ၊ အခှံမာအသီး အစအေ့ဆနျတှကေို စားသုံးပေးပါ ။
ကယျလိုရီနညျးပွီး အာဟာရတနျဖိုးမပါသလောကျရှိတဲ့ အခြိုရညျတှကေို ရှောငျပါ ။ သဈသီးဖြျောရညျ နှားနို့ ဒိနျခဉျြ နဲ့ ရကေိုမြားမြား သောကျပါ ။
ထမငျးမစားခငျ နာရီဝကျအလိုနဲ့ စားပွီး နာရီဝကျအတှငျးမှာ အရညျသောကျပါ ။ ထမငျးစားခါနီးသောကျရငျ ဗိုကျပွညျ့တငျးကာ အစားစားခငျြစိတျ နညျးသှားပါလိမျ့မယျ ။
ကယျလိုရီ ပါဝငျမှုမြားတဲ့ အစာတှေ အခှံမာသီးတှေ မွပေဲ ထောပတျသီး စတာတှကေို စားပါ ။အိပျယာဝငျခြိနျမှာ နှားနို့ ငှကျပြောသီး စတဲ့ အစာတှေ စားပါ ။
ကွကျသားကို ဟငျးသီးဟငျးရှကျစှပျပွုတျထဲ ထညျ့၍ ရောနှော ခကျြပွုတျတာမြိုး ကွကျဥ ဘဲဥ ကို ဟငျးသီးဟငျးရှကျနဲ့ ရောကွျောတာမြိုး ကုလားပဲကို ဟငျးသီးဟငျးရှကျ အစုံအလငျထညျ့ပွီး ရောခကျြတာမြိုးတှေ ပွုလုပျကာစားပေးပါ ။
ကွှကျသားထုထညျ ကွီးမားလာစဖေို့နဲ့ ခန်ဓာကိုယျပွညျ့တငျး သနျစှမျးလာစဖေို့ အလေးမလကေ့ငျြ့ခနျးမြား ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ ။ လကေ့ငျြ့ခနျး ပွုလုပျခွငျးဟာ အစာစားခငျြစိတျကို တိုးမွငျ့လာစပေါတယျ ။
ပိနျနလေို့ စိတျညဈနမေဲ့အစား ဖျောပွပါ ကငျြ့စဉျမြားနဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျတကျအောငျ ပွုလုပျလိုကျပါ သငျ့ကို စိတျအလို ပွညျ့စမှောမလှဲပါ ။
အချစ်က အသေးအမွှားလေးတွေ ကိုတောင် အမှတ်တရ ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၃ နှစ်ကာလက ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ စတွေ့ချိန်မှာ ဖုန်းနံပါတ် ရေးပေးခဲ့တဲ့ မီးရထား လက်မှတ်ဖြတ်ပိုင်းလေးကို အခုထိ အမှတ်တရ သိမ်းထားဆဲ ပါလို့ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း က တီဗီရှိုး တစ်ခုမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တကယ် ချစ်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက် ချစ်သူနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အရာရာက အမှတ်တရတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ချစ်သူနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အရာတွေမှာ သေးသေးမွှားမွှား ဆိုတာ မရှိပါဘူး ။ အားလုံးက အမှတ်ရစရာတွေချည်းပါပဲ ။ ဂျင်မီဖော်လွန်ရဲ့ တူနိုက်ရှိုး အစီးအစဉ်မှာ ဂျင်မီက ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး …